EU nabatara ọgwụ Lagevrito ọhụrụ nke Merck ka ikpe COVID-19 na-arị elu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » EU nabatara ọgwụ Lagevrito ọhụrụ nke Merck ka ikpe COVID-19 na-arị elu
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Sustainability News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ọgwụ ọhụrụ Merck nabatara nke EU ka ikpe COVID-19 na-arị elu.
Onye na-ahụ maka EU kwuru na ekwesịrị inye ọgwụgwọ ahụ ozugbo enwere ike ka achọpụtara COVID-19 yana n'ime ụbọchị ise nke mmalite nke mgbaàmà. Ekwesịrị ịṅụ ọgwụ ahụ ugboro abụọ n'ụbọchị maka ụbọchị ise.
Na Fraịde, ndị na-ahụ maka ọgwụ na European Union wepụtara 'ndụmọdụ' na-akwado ojiji mberede nke ọgwụ mgbochi coronavirus ọhụrụ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọgwụ mba America mepụtara. Merck na mmekorita ya na Ridgeback Biotherapeutics, n'agbanyeghị na ndị ọchịchị US enyebeghị ya ikike.
The Mediclọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọgwụ nke Europe (EMA) akwadola iji ihe mberede mee ihe MerckỌgwụ maka ọgwụgwọ maka ndị ọrịa COVID-19 na-adịghị ike ụlọ ọgwụ ka ọrịa coronavirus ọhụrụ na-agbasa n'ofe mpaghara Europe.
Na nkwupụta, EMA A na-eji ọgwụ akpọrọ Lagevrio - nke a makwaara dị ka molnupiravir ma ọ bụ MK 4482 - “nwere ike iji gwọọ ndị okenye nwere COVID-19 na-anaghị achọ oxygen mgbakwunye yana ndị nọ n'ihe ize ndụ dị ukwuu nke ịmalite COVID-19 siri ike.”
The EMA depụtara mmetụta ndị nwere ike ịdị na pill, gụnyere afọ ọsịsa dị nro ma ọ bụ nke na-agafeghị oke, ọgbụgbọ, isi ọwụwa na isi ọwụwa. A naghị atụ aro ọgwụgwọ ahụ maka ụmụ nwanyị dị ime.
Onye na-ahụ maka njikwa ahụ kwupụtara na mbụ na Fraịde na ọ malitela nyochaa ọgwụ Pfizer Paxlovid maka COVID-19 na otu ebumnuche ahụ "ịkwado ndị ọchịchị mba" ndị nwere ike kpebie iji ya mee ihe n'oge tupu ikike ịzụ ahịa n'ihi ịrị elu na ọnwụ na Europe.
Taa, Austria kwupụtara na ọ ga-abanye na mkpọchi mba ọhụrụ site na Mọnde wee mee ka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa bụrụ iwu, ebe ndị ọrụ ahụike Germany kwuru na mba ahụ aghọọla “otu nnukwu ntiwapụ.”
Ma Pfizer na Merck arịọla nkwado maka ọgwụ coronavirus ha site na nchịkwa nri na ọgwụ US, mana amabeghị mgbe enwere ike inye ya.
Calzone na Pizza: Duo dị egwu January 24, 2022
Ngalaba steeti US na-akwadozi ụlọ ọrụ nnọchi anya US na Ukraine maka mbuso agha Russia January 24, 2022
Onye isi oche Dr. Walter Mzembi bụ Olileanya Ọhụrụ maka njem nlegharị anya Africa January 24, 2022
Egwu Rumba Kongo abanyela ndepụta ihe nketa UNESCO January 23, 2022
UNDP na-ekuba ndụ ọhụrụ na njem nlegharị anya Tanzania January 23, 2022